नर्सरी व्याड वनाउने प्रविधि - Yohosamachar
कृषकहरुले तरकारी उपभोग गर्नको लागि तथा व्यावशायिक रुपमा आम्दानी गर्नको लागि तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । कतिपय जिल्लाहरुको ठाउँ ठाउँमा तरकारी खेती गर्न नजानेर आम्दानी गर्न त परै जाओस, तरकारी खान नपाएर जीवन विताएर वसेका हुन्छन् ।
यस्तो ठाउँहरुमा तरकारी उत्पादन गराउन सकेमा कृषकहरुको स्वास्थमा सुधार हँदै जाने र आम्दानीको वाटो खुल्दै जाने हुन्छ । कतिपय तरकारीहरु सिधै वीउ रोपेर तरकारी उतपादन गरिन्छ भने कतिपय तरकारीहरुको वीउ नर्सरी व्याडमा राखी वेर्ना तयार पारेर जग्गामा सारीकन तरकारी उत्पादन गरिन्छ ।
यसरी सानो जग्गामा तरकारीको वीउ रोपेर स्वस्थ वेर्ना उमार्ने तरिकालाई नर्सरी भनिन्छ । माथि उल्लेखित गरे अनुसार तरकारी २ तरिकाबाट गर्न सकिन्छ । खेतवारीमा सिधै वीउ रोपेर र नर्सरीमा वेर्ना उत्पादन गरेर । सिधै वीउ रोपेर वा छर्ने तरकारीहरुमा सिमी, मुला, केराउ, सलगम, चम्सुर, पालुङ्गो, वोडी, स्कुस आदि पर्दछ ।
त्यस्तै गरी नर्सरी राखी वेर्ना तयार पार्ने तरकारीका वीउहरु गोलभेडा, खुर्सानी, भन्टा, भेडेखुर्सानी, काउली, वन्दा, व्रोकाउली, ग्याँठकोवी, रायो, स्वीसचार्ड, जिरीको साग, प्याज, कुरिलो, काक्रो, जुकुनी, घिरौला, करेला, लौका आदि पर्दछन् । नर्सरीमा वेर्ना उत्पादन गर्दा मेहनत वढी गर्नु पर्ने हुन्छ, सोही अनुसार वेर्ना स्वस्थ भई उत्पादन बढी दिन्छ ।
नर्सरीमा वेर्ना उत्पादन गर्नुको फाईदाहरु
१. वीउको राम्रो सदुपयोग हुन्छ ।
२. हेरचाह र सुरक्षा गर्न सजिलो हुन्छ ।
३. जग्गाको पुरा सदुपयोग हुन्छ ।
४. छिटो र सजिलोसंग वेर्ना हुर्काउन सकिन्छ ।
५. प्रतिकूल मौसममा वेर्ना तयार पार्न सकिन्छ ।
तरकारी नर्सरी व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु
१. ठाउँको छनौट
नर्सरीको लागि ठाउँको छनौट गर्दा पहारिलो ठाउँ, पानी नजम्ने ठाउँ, रुख, पर्खाल, घर, डाँडाले घाम नछेल्ने ठाउँ, पानीको सुविधा नजिक भएको, हेरचाह गर्न सजिलो, हावा खेल्ने ठाउँ हुनु पर्छ ।
२. माटोको तयारील
माटोमा हावाको संचार वढाउन खोलाबाट ल्याएको वलौटे वा जंगलको माटो वा कहिल्यै खेती नगरेको जग्गाको माटो र राम्रोसंग तयार भएको वुर्वुराउदो मल वरावरी मिसाएर व्याडको लागि माटो तयार पार्न सकिन्छ ।
३. माटोको उपचार
माटोमा हुने कीरा तथा रोगले वेर्नाहरुलाई नास गर्ने भएको हुनाले माटो उपचार गर्न अति आवश्यक हुन्छ । माटो उपचार रासायनिक विषादी, जैविक विषादी र सोलाराईजेशन मध्ये एक तरिकाले गर्न सकिन्छ । सोलाराईजेशन तरिकाबाट वातावरण तथा पर्यावरणलाई असर पार्दैन ।
४. चिस्यान व्यवस्थापन
नर्सरीमा चिस्यानको मात्रा कम भयो भने जमिन कडा भएर जान्छ, जसले गर्दा वीउको भ्रण सुकेर जान्छ । त्यास्तै गरी चिस्यान कम भएमा माटोमा हावा खेल्न सक्दैन र माटोको तापक्रम वढेर वीउ कहिन्छ । त्यसकारण व्याडमा चिस्याान ठिक्क मात्रामा मिलाउन आवश्यक हुन्छ ।
५. छाना दिने
व्याडमा भएको वेर्नाहरुलाई वा वीउलाई हावा, हुरी, वतास, असीना, तुषारो, शित आदिबाट वचाउनको लागि वीउ राखेको दिन ५ फिट अग्लो खर, पराल, स्याउलाको छाना हाली दिने । यदि ५ फिट भन्दा होचो भयो भने सूर्यको प्रकाश नर्सरी व्याडमा पर्दैन र वेर्ना सूर्यको किरणको कमीले गर्दा लुलो नसर्ने हुन्छ ।
६. छापो दिने र हटाउने
चराचुरुङ्गीबाट वीउ वचाउन र माटोको चिस्यान कायम राख्नको लागि छापो दिनु पर्छ । वीउ राखेको ३, ४ दिनमा टुसा आएपछि वा ५० प्रतिशत भन्दा वढी वेर्ना उम्रे पछि छापो हटाई दिनु पर्छ । छापो हटाउन ढिलो गरेमा विरुवा वाङ्गो टिङ्गो हुन्छ ।
७. वेर्ना ढल्ने रोग व्यवस्थापन
यो रोग खासगरी लाग्नुको कारण बढी वर्षा भएर, बढी तापक्रम वढेर, बढी आद्र्रता भएर, वेर्नाको घनत्व धेरै भएर, माटोमा चिस्यान बढी चिस्यान भएर हो । जसले गर्दा वीउ उम्रन नसकी कुहिन्छ वा उम्रेर पनि फेद कुहिने हुन्छ ।
० वीउ रोप्नु भन्दा अगाडी वीउको उपचार गर्ने ।
० वीउ ज्यादा वाक्लो नछर्ने ।
० नर्सरी सुक्न लाग्यो भने मात्र सिंचाई गर्ने ।
० संभव भएसम्म नर्सरीको लागि माटो सोलाराईजेशन गर्ने । यदि गर्न सकिएन भने सुकेको स्याउलाहरु १ फिट अग्लो व्याडमा विछ्याई आगो लगाउने ।
नर्सरी व्याड राख्ने प्रविधिहरु
वेर्ना तयार गर्नको लागि जाडो र गर्मी मौसमलाई ख्याल गरेर छुट्टाछुट्टै तरिकाबाट नर्सरी राख्न सकिन्छ । जसले गर्दा मौसमी तथा वेमौसमी तरकारी उत्पादन गर्न सकिन्छ । ति यस प्रकारका छन् ।
१. खुल्ला नर्सरी व्याड
२. गुमोज नर्सरी व्याड (तल्लो पहाडको लागि)
३. गुमोज सहितको तातो नर्सरी व्याड (उच्च पहाडको लागि)
यस प्रविधिबाट खुर्सानी र काउली समुहको तरकारीको नर्सरी तयार पार्न सकिन्छ । जस्तै ः काउली, वन्दा, व्रोकउली, रायो, स्विसचार्ड, खुर्सानी, भेडेखुर्सानी, भण्टा, गोलभेडा आदि ।
नर्सरी तयार पार्ने तरिका
क) सर्वप्रथम् माथि उल्लेखित गरे अनुसार ठाउँको छनौट गर्ने ।
ख) ठाउँको छनौट गरी सकिए पछि माटो तयार गर्ने । माटो सकेसम्म दोमट तथा कहिल्यै खेती नगरेको ठाउँ भए राम्रो हुन्छ । त्यस जग्गामा राम्रोसंग खनजोत गरेर ढुङ्गा, छेस्का, झारपात राम्रोसंग केलाउने र माटोलाई वुर्वाराउदो मसिनो पार्ने ।
ग) व्याड वनाउदा १ मिटर चौडाई १५ से.मी. उचाई र लाम्वाई आवश्यक्ता अनुसार वनाउनु पर्दछ ।
घ) यसरी नर्सरी व्याड वनाएपछि राम्रोसंग पाकेको वुर्वाराउँदो गोठेमल वा कम्पोष्ट मल वा घुरेन खाडलको मल राम्रोसंग केलाएको प्रति वर्ग मिटरमा ५ के जी को दरले माटोसंग राम्ररी मिसाएर मोल्ने ।
ङ) यसरी माटो र मल नर्सरी व्याडमा मोलेर राम्रोसंग सम्याएपछि वीउ खासल्नको लागि चुच्चे कुटो वा छेस्काले ४ औंलको फरकमा धर्का कोर्ने, धर्को कोर्दा २ औंल वा २–३ से.मी। को गहिराईमा कोर्ने ।
च) वीउ खसाल्नु भन्दा अगाडी रासायनिक विषादी वा जैविक विषादी वा ई एम बाट वीउ उपचार गर्ने । यसरी वीउ उपचार गरेको केही समय पछि धर्सो तानेको ठाउँमा २ औंलको फरकमा वीउ खसाल्ने । वीउ खसाल्नको लागि वीउमा माटो, वालुवा, खरानी, सुकेको धुलो मल डवल मिसाएर वीउ छर्न सकिन्छ । यसो छर्दा वीउ एकै ठाउँमा खस्दैन ।
छ) वीउ खसाली सकेपछि वीउलाई माटोले छोप्ने ।
ज) छोपेको वीउलाई पशुपंक्षीबाट जोगाउन र माटोमा चिस्यानको सन्तुलन मिलाउन कीरा भगाउने खालको रुखविरुवाको हरियो पात वा खर वा परालको छापो हाली दिने ।
झ) नर्सरीमा हल्का सिंचाई गरी दिने ।
ञ) हावा, हुरी, वतास, घामपानी, असिना, तुषारो, शितबाट जोगाउन ५ फिटअग्लो छाना हालि दिने ।
ट) ३, ४ दिन पछि राम्रोसंग टुसा पलाई सकेपछि छापो हटाइ दिने ।
ठ) वेलावेलामा राम्रो हेरचाह गर्ने ।
२. गुमोज नर्र्सरी व्याड (तल्लो पहाडको लागि)
यस्तो किसिमको नर्सरी अक्सरगरी समय भन्दा केही अगाडी तरकारी उत्पादन गर्न वा जाडो समयमा चाँडै वेर्ना तयार पार्न गुमोज नर्सरी प्रविधि अप्नाईन्छ । साह्रै चिसो हुने ठाउँ छ भने तातो नर्सरी अप्नाउन सकिन्छ ।
यस नर्सरीमा गर्मी मौसममा हुने लहरे वाली जातका वीउ प्लाष्टिक थैला तथा पातको थैलामा वीउ रोपेर वेर्ना उत्पादन गर्न सकिन्छ । जस्तै ः काक्रो, जुकुनी, करेला, घिरौला, लौका, चिचिण्डो अदि पर्दछन् । साह्रै चिसो हुने ठाउँमा अन्य तरकारीको वेर्ना तयार गर्नु परे गुमोज भित्र १ नम्वरमा जस्तै व्याड तयार पारेर गर्न सकिन्छ ।
गुमोज नर्सरी तयार पार्ने तरिका
क) माथि उल्लेखित गरे अनुसार ठाउँको छनौट गर्ने ।
ख) ठाउँको छनौट गरी सकेपछि माटोको तयार गर्ने । माटो चाही वनको माटो वा कहिल्यै खेती नगरेको जग्गाको माटो भए राम्रो हुन्छ ।
ग) आवश्यक सामग्रीहरु जस्तै बाँस वा चोया, ४०० गेजको प्लाष्टिक, प्लाष्टिक तथा पातको थैलो, डोरी, काट्ने र खत्रे औजार, विषादी, वीउ, मल जुटाउने ।
घ) मल, माटो र वालुवा माटोको अवस्था हेरीकन अनुपात मिलाएर एकै ठाउँमा मिसाएर माुल्ने । जस्तै ः मलिलो माटो २ भाग
पाकेको मल २ भाग
वालुवा १ भाग (चिम्टाईलो माटो भएमा)
ङ) यसरी माटो तयार भएकोलाई प्लाष्टिक थैलो वा पातको थैलोमा भर्ने । भर्दा खेरी माटो खुकुलो हुनु हुदैन, केही कसिएको हुनु पर्छ । माटो भर्दा थैलो ३ से.मी. जति खाली हुनु पर्छ ।
च) माटो भरेको थैलो ठाडो पारी मिलाएर राख्नको लागि १ मिटर चौडाई, ६ ईन्च गहिराई र आवश्यक्ता अनुसारको लम्वाईको चारकुना मिलाएर सम्म परेको खाल्डो तयार पार्ने ।
छ) त्यस खाल्डोमा माटो भरेको थैलो सिधा ठाडो हुने गरी लाईन मिलाएर राख्ने र त्यसमा नढल्ने गरी बाँसको भाटा तेर्साई दिने र फेरी एवंरितले थैलो खाल्डोमा भर्दै जाने ।
ज) यसरी थैलो राखि सकेपछि १,१ वटा थैलोमा २, २ वटा वीउ नखपिटिने गरी राख्ने र पछि माटोले थैलाको मुखसम्म पुर्ने ।
झ) अव वीउलाई तातो वनाउनको लागि नर्सरीमा चन्द्राकारको गोलो १ मिटर अग्लो र चौडाई पट्टी ६, ६ ईन्च छोडेर बाँसको भाटा गाड्ने । गाड्दा खेरी १, १ हातको फरकमा गाड्ने र ३ ठाउँमा तेर्सो भाटा हली दिने ।
ञ) त्यसपछि एकसरो भिज्ने गरी सिंचाई गरी दिने । सिंचाई गरी सकेपछि माथिबाट पुरै प्लाष्टिकले ढाकी दिने र जमिनमा चारै तिरबाट माटोले प्लाष्टिकलाई ढाकी दिने । यसरी ढाक्दा कतैबाट हावा छिर्न पाउदैन ।
ट) वेर्नाको पात २,३ वटा भएपछि अलीअली प्लाष्टिक खोल्दै वाहिरको चिसो हावा खुवाउने । तर वादल लागेको वेला र साँझ परेपछि पहिलाको जस्तै हावा नपस्ने गरी प्लाष्टिकलाई माटोले छोप्ने । घाम लागेको वेलामा पानीको आवश्यक्ता परे सिंचाई गरी दिने ।
ठ) वेर्ना रोप्नु भन्दा २ दिन अगाडी पुरै दिन रात प्लाष्टिक हटाई दिने, विरुवा केही भएन भने जग्गामा वेर्ना सार्दा राम्रो हुन्छ ।
उच्च पहाड तिर वढी जाडो हुने र लेक पर्ने भएको हुनाले वीउ सजिलैसंग उम्रन नसक्ने र उम्रे पनि साह्रै ढिलो तथा समय धेरै लाग्छ ।
यस्तो ठाउँमा गुमोज भित्र थैलोमा माटो भरेर वा सिधै जमिनमा नर्सरी तयार पारी तरकारीको वेर्ना उमार्न सकिन्छ । जमिनमा तातो व्याड वनाउने प्रविधि वाहेक अन्य १ र २ नम्वरमा उल्लेख गरे जस्तै गर्ने ।
तातो व्याड वनाउने तरिका
क)  माथि उल्लेखित गरे अनुसार ठाउँको छनौट गर्ने ।
ख)  २ हात चौडाई, १ हात गहिराई र आवश्यक्ता अनुसारको लम्वाई भएको खाडल तयार पार्ने ।
ग)  खाडलको तल्लो भागमा पराल, नल वा सोतर चार औंल बाक्लो गरी हाल्नु पर्छ ।
घ)  यस माथि कम्तिमा चार औंल जति काँचो गोवर राखेर पानीले भिजाउनु पछ ।
ङ)  गोवर माथि फेरी पराल, नल वा सोतरको तह चार औंल बाक्लो गरी राख्नु पर्छ ।
च)  यस मथि चार औंल खाडलको माटो राख्नु पर्छ ।
छ)  अन्तिममा चार औंल मलिलो माटो (नर्सरी माटो) मसिनो पारेर हाल्नु पर्दछ ।ज) सिधै यस माटोमा वीउ रोपिन्छ भने मल, वीउ छर्ने र अन्य हेरचाह १ नम्वरमा उल्लेख गरे जस्तै गर्ने । यसमा पनि वेर्ना छिटो उमार्न गुमोज वनाउनु पर्छ ।
झ) लहरे वालीको वेर्ना उमार्न २ नम्वरमा उल्लेख गरे जस्तै गरेर तातो व्याडमा राख्ने र गुमोज वनाई दिने ।
नर्सरीमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु
१. नर्सरीमा आवश्यक चिस्यान कायम राख्नु पर्छ । जाडो महिनामा हरेक दिन वा केही दिन विताएर हजारीले दिनको १०–१२ बजे एकनाससंग पानी दिनु पर्छ । त्यस्तै गर्मी महिनामा पानी दिने काम बेलुकीपख गर्नु राम्रो हुन्छ ।
२. गुमोज भित्र वेर्ना उम्रेको ८–१० दिन पछि घाम लागेको वेलामा जमिनबाट अलिअलि प्लाष्टिक खोल्दै चिसो हावामा हुर्कन वानी पार्ने, तर वादल लागेको वेला र साँझ परेपछि प्लाष्किले ढाकेर माटोले पुर्ने । पछि वेर्ना सार्नु भन्दा २ दिन अगाडी चौविसै घण्टा प्लाष्टिक खोली दिने, यसोगर्दा वेर्ना कडा हुन्छ र रोप्दा सजिलैसँग हुर्किन्छ ।
३. वीउ छरेपछि छिटो वा अघि उम्रिएको वेर्नाले वढी उत्पादन दिने भएकोले व्याडमा पटकपटक गरी पछि वा ढिलो उम्रिएका वेर्नालाई उखेलेर हटाउनु पर्छ । यस्ता वेर्नाले राम्रो उत्पादन दिदैन ।
४. वेर्ना २ पाते भएपछि वा वेर्ना उम्रेको १०–१२ दिनमा गाई भैंसीको गहुात १ भागमा ४ भाग पानी मिसाएर छरेमा विरुवा हर्लक्क वढ्छ ।
५. वेर्नालाई रोग सहन सक्ने शक्ति प्रदान गर्न पेन्सीबाबा १ मिलि प्रति ५ लिटर पानीका दरले छर्नुपर्छ र ई एम २ मिलि प्रति लिटर पानीका दरले १० दिनको फरकमा वेर्ना र माटो भिज्ने गरी छर्नु पर्छ ।
६. यदी कीराले दुःख दिन थाल्यो भने सूर्ती, वकाईनो, निम, तितेपाती, असुरो, सिस्नु मध्ये जे भेटाउँछ त्यसलाई थिचेर र पानीमा २४ घण्टासम्म भिजाएर त्यसको रससंग अलिकति सावुन मिसाई छर्न सकिन्छ । साथै गाईवस्तुको गहुँत वा जैविक मल पाए प्रयोग गर्न सकिन्छ । वेर्नालाई वाहिर लगाएको वालीलाई भन्दा पातलो वनाएर छर्नु पर्छ ।
७. वेर्ना बाक्लो छ भने छाँट्नु पर्छ नत्र भने वेर्ना कुहिने वढी सम्भावना हुन्छ ।
८. वेर्ना प्राय ४–६ हप्तामा सार्न तयार हुन्छ तर अगौटे जातका काउली समुहका ३ हप्ते वेर्ना सार्न उपयुक्त हुन्छ ।
← वास्तु ज्ञानकाे सामान्य परिचय
थप ४ जना कोरोना संक्रमित निको भए →
April 12, 2020 April 14, 2020 योहो समाचार	0